Kuona kweKurarama kweNew Horizons, Pluto neMwedzi wayo -
New Horizons Kusangana naPluto nemwedzi yayo
Ichi chishandiso chinoratidza kuratidzwa kwenguva chaiyo kweiyo New Horizons spacecraft uye kusangana kwayo nepluto nemwedzi yayo vachishandisa data kubva ku NASA's JPL webhusaiti .
Gadziridza : Isu ikozvino tinoratidzira yeanimhanzi iyo inotanga pamberi pekusangana, nenguva ichimhanyisa. Kuti uone New Horizons uye Pluto seRarama maonero, vhura iyo pani yekudzvanya uye tinya hombe yeyero mabhatani kuti umise zvese kune chaiyo nguva.
taurus yechirume uye pisces yevakadzi kuenderana
Aya maonero anoshandisa otomatiki kuyera kuti ave nechokwadi chekuti nyowani nyowani spacecraft uye pluto anogara ari pachiratidziri. Nekuti maowoni matsva ari kufamba nekukurumidza kwazvo (makiromita makumi mana nemazana mana paawa kana makiromita mazana maviri nemakumi maviri paawa), kusangana (kana uchimhanyisa mberi nguva) kunoita kunge kunoitika nekukasira. Nekudaro kana iwe ukangwarira kana uchimhanyisa nguva kumberi uye kumashure ipapo iwe uchaona iyo inobhururuka mune zvakanaka ruzivo.
Maonero akanakisa aive munguva chaiyo seNew Horizons akapfuura musi wa14 Chikunguru 2015 na11: 49 UTC. Kana uchitarisa iyi purogiramu nenguva yakatarwa kusvika kumazuva maviri kana kupfuura kure nepedyo nzira, ipapo Pluto inoonekwa seye smudge yakaumbwa nemazita ayo nemwedzi yayo.
Hapana Mifananidzo paZuva
Kwakange kusina mafoto e 'live' akatumirwa kumba pazuva rekubhururuka nekuti New Horizons yaive nezuva rakabatikana zvikuru kuunganidza data. Kuita kuti chitundumuseremusere chive chakavimbika sezvinobvira pane zvikamu zvishoma zvinofamba sezvinobvira uye nekudaro zvese zviridzwa uye nhare yekutaurirana zvakagadziriswa. Izvi zvinoreva kuti chitundumuseremusere chese chinofanira kutendeukira kunongedza zviridzwa zvadzo izvo zvaireva kuti kanyanga kaisakwanisa kunongedzerwa pasi kana data richiunganidzwa panguva yekubhururuka.
Zvino izvo chitundumuseremusere ichienda kure naPluto uye isiri kutora zviyero zvakawandisa, data rava kukwanisa kuendesa pasi. Zvinotora mwedzi gumi nematanhatu kuti rese dhata riendeswe kupasi nekuti kureba kwakakura uye simba rakaderera remutepfenyuro zvinoreva kuti bandwidth iri kutenderedza diki 1 kilobiti pasekondi - ingangoita ka8000 nguva inononoka pane inobatanidzwazve Broadband kubatana.
Kuona mifananidzo yazvino, uye vhidhiyo inonakidza paNew Horizons nemabasa ayo anobhururuka ona yedu New Horizons peji.
iyo nyika ine gore rakarebesa
Kuti uone kusangana kubva ku spacecrafts kuona, wadii kurodha pasi iyo NASA App , sarudza maNew Horizons kubva kuTours & Features sarudzo uye ona kuti maNew Horizons anotarisa sei Pluto nemwedzi yayo mukati mekubhururuka-ne. Unogona kuona chitundumuseremusere sezvazviri ikozvino kana pre / ongorora iyo inobhururuka-ne.
Kuti uwane tsananguro yehunyanzvi yezviridzwa zvinotakurwa neNew Horizons, shanyira izvi John Hopkins peji.
Pluto nemwedzi yaro LIVE
New Horizons - Pasi kuPluto
taurus mukadzi gemini murume ari pamubhedha
ndeipi nyika yekupedzisira mune yezuva
zvinorevei kurota kwekubhururuka